Ukwehlukaniswa kwe-Ultrasonic: Amanzi, Ukuqunjelwa, Ukusabalalisa - Hielscher Ultrasound Technology
Izihlanganisi ze-Ultrasonic zisetshenziselwa kabanzi ukumanzisa, ukuhlakaza noma ukuhlakaza izinhlayiya nezinhlayiya zibe iziphuzo. Ama-ultrasonicators asebenza ngokuphezulu enza amabutho amakhulu e-shear, aphuka futhi aqhekeze, ama-agglomerates nezinhlayiya eziyinhloko usayizi omncane we-microscopic noma we-nano. Ukulungiswa kokufana kwezinhlayiyana enkundleni ye-acoustic cavitation kuphumela ekusatshalalisweni kwe-kuyizinhlayiyana elincanyana kanye nenhlabathi elinganayo.
Ama-Ultrasonic Disintegrators kanye Nezicelo zawo
Ama-distrigator e-Ultrasonic aletha amabutho amakhulu e-shear, okwenza umthelela odingekayo kuma-solids anjengezinhlayiya, amakristalu, kanye nemicu yokuwaphazamisa bese ewahlukanisa aze afike kusayizi obhekisiwe, isb micron- noma usayizi we-nano-size. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuzihlukanisa ezinjenge-high-shear blade mixers, ama-homogenizer asezingeni eliphakeme, ama-mill bead, ama-microfluidizer njll. Abahlukanisi be-ultrasonic banikeza ezinye izinzuzo ezinkulu.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Disintegrators
I-high-intensity cavitation kanye ne-shear
Isikhathi- & ephumelela amandla
Isimiso esisebenzayo sokuhlakazeka kwe-ultrasonic probe-type isekwe kwisizukulwane se-acoustic cavitation. Ngokuphenya kwe-ultrasonic, amagagasi aphezulu we-ultrasound adluliselwa kwinqubo ephakathi nenqubo (okuwukuthi uketshezi noma ukufiphala). Amagagasi e-ultrasound adabula uketshezi, lapho enza khona imijikelezo eshintshashintshashintsha ephezulu. Ngesikhathi sokucindezela kwamabhamuza we-vacuum ngomzuzu omincane, okubizwa ngokuthi ama-cavitation bubble, avela. Lama-bubble we-cavitation akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yokucindezela aze afike usayizi, lapho engeke akwazi ukufaka amanye amandla. Kuleli qophelo, ama-bubble we-cavitation afaka ngamandla ngobudlova futhi adale izimo zasendaweni ezedlula njengezinga lokushisa eliphakeme kakhulu, izingcindezi, izinga lokushisa ngokweqile kanye nokwehluka kwengcindezi (ngenxa yokushisa okuphezulu / amazinga okupholisa nokushintshashintsha kwengcindezi), iziphithiphithi ezincane nemifudlana ewuketshezi efinyelela ku-kufika. 180m / s. Lezo zimo zibonisa imiphumela embonakalayo ebalulekile yezinhlayiya eziphakathi nendawo, ngoba imifudlana ewuketshezi ephezulu isheshisa izinhlayiya eziphakathi nendawo ukuze izinhlayiya zishayane. Ngokushayisana kwezinhlayiya, izinto eziqinile (isib. Izinhlayiya, imicu, amaseli) ziyavela, ziyaqhekeka futhi zihlukaniswe izingcezu ezinobukhulu obukhulu.
Iziyaluyalu eziphakeme ezenziwa yi-ultrasonication zandisa ukudluliselwa kwesisindo phakathi kwezigaba futhi zikhuthaze ukuncibilika kwamapoda noma ukusabela kwamakhemikhali okukhulu kakhulu. Lokhu kwenza abahlukanisi be-ultrasonic babe yithuluzi elithandwayo ukuqinisa izinqubo ezinjengokugaya, ukuhlakazeka, ukukhipha amandla nokuqeda amandla.
7x abahlukanisi be-ultrasonis UIP1000hdT (Amandla we-7x 1kW e-ultrasonic) afakwe njengeqoqo
Funda kabanzi mayelana nokuqiniswa kwe-ultrasonic kokuphendula kwamakhemikhali (i-sonochemistry)!
Izicelo ze-Ultrasonic Disintegrators
Ukukhokha & ukugaya
i-deagglomeration & ukuhlakazeka
Ukwenza ngcono ukuthunyelwa kwenqwaba
Ama-Ultrasonic Disintegrators Wokuncipha Kwezinhlayiyana
Ama-Ultrasonic disintegrators asetshenziselwa ukuncishiswa kwezinhlayiya nokusatshalaliswa kwezinhlayiyana, ukufaka lokhu kusho ukuqondiswa kwangempela kwezinhlayiya eziyinhloko (okubizwa ngokuthi yi-milling) noma ukwephulwa kwama-agglomerates (okubizwa ngokuthi yi-deagglomeration / dispersion).
Ukusatshalaliswa kosayizi oyizinhlayiyana nezithombe ze-SEM zeMg2Si ngaphambi nangemva kokugaya i-ultrasonic (UM). (a) Ukusatshalaliswa ngosayizi wama-Particle; (b) isithombe se-SEM ngaphambi kokugaya i-ultrasonic; (c) isithombe se-SEM ngemuva kokugaya i-ultrasonic ku-50% PVP-50% EtOH nge-2 h.
I-Ultrasonic Disintegrators for Milling & ukugaya
I-cavitation eyenziwe nge-ultrasonically idala amabutho amakhulu e-shear futhi ngaleyo ndlela ukushayisana okuhlobene okuhlobene. Izinsimbi zesilayidi zisebenza njengokugaya okuphakathi (ngokuqhathaniswa nobuhlalu noma iparele kusilevu / iphepha lokugaya): Zisheshiswa ngemisinga ye-cavitational fluid, efinyelela kalula amasheya afinyelela ku-180m / s. Lapho izinhlayiya zishayisana ngesivinini esikhulu kangako, ziyaqhekeka futhi zidilike zibe izingcezu ezinobukhulu obukhulu. Abasiki bengqimba be-Ultrasonic bangaphula ngisho nezinhlayiya eziyinhloko. Ama-Ultrasonic flow cell reactors aqinisekisa ukuphathwa okufananayo kwazo zonke izinhlayiya ukuze ukugaya kwe-ultrasonic kuholele ekusakazweni kwesayizi kuyizinhlayiyana.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokugaya i-ultrasonic!
Ama-Ultrasonic Disintegrators we-Deagglomeration & ukuhlakazeka
Amapharamitha wenqubo we-Ultrasonic angalawulwa ngokuqondile, ukuze abahlukanisi be-ultrasonic bakwazi ukugaya izinhlayiya eziyinhloko lapho kusetshenziswa amplopes ephezulu nokucindezela okuphezulu. Ngakolunye uhlangothi, izinhlelo zokuhlakazeka ze-ultrasonic nazo zingaqhutshwa ezindaweni eziphakeme kakhulu kanye nezimo ezibandayo, ukuze ukwakheka kwezinhlayiyana nengaphezulu kuhlala kungasasebenzi, kepha ama-agglomerates aqhekeke futhi izinhlayiya ngazinye zisatshalaliswa ngokufanayo kusimo esitshekile.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-deagglomeration ye-ultrasonic nokusabalalisa!
Ama-Ultrasonic Disintegrators we-Emulsification
Lapho kwenziwa iziphuzo ezimbili ezingabonakali (isib, amanzi no-oyela), i-ultrasonic cavitation iphazamisa amaconsi – khiqiza amaconsi amancane kakhulu ezigaba ezimbili ezingenakuvinjwa, ezihlanganiswa ndawonye. Njengoba abahlukanisi be-ultrasonic bekhiqiza kalula amaconsi osayizi we-nano, ukuqina kwe-emulsion eqinisiwe kukhombisa ukuqina kwesikhathi eside nokubukeka okucacile.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-nano-emulsization ye-ultrasonic!
I-Ultrasonic Disintegrators Yokuqothula
Ama-Ultrasonic disintegrators asetshenziselwa ukuqeda i-powder namathebulethi inqubo esheshayo, i-facile nephephile. Ultrasonically ekhiqizwa i-cavitation idonsa ingaphezulu komhlaba, futhi idlulisa izingcezwana ezingonakalisiwe emthonjeni okhiqiza lapho isixazululo esikhulu.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuqedwa kwe-ultrasonic!
Ukuqedwa kwe-Ultrasonic kweJelly Babies Emanzini nge I-Ultrasonic Disintegrator UP200St
Ngabe isebenza kanjani i-Mechanical Disintegrator?
Ama-Ultrasonic lab disintegrators asebenzisa inqubo efanayo yemishini njengoba abahlukanisi bezimboni benza. Amasistimu wokuxubanisa we-disintegrator ahlukanisa ama-agglomerates nama-aggregates, axazulule izinto eziqinile noma ahlakaze izinhlayiya eziqinile kumasikhethi e-liquid. Ukuhlukaniswa kwe-Ultrasonic kufaka iprojekhthi ephezulu ye-ultrasonic ethangini le-batch noma ku-line-flow flow cell reaction. I-probe (i-sonotrode) ye-ultrason disintegrator iyanyakaza kulolu ketshezi emthanjeni ophakeme kakhulu futhi idala ukwenziwa kwe-ultrasonic okukhulu ku-ketshezi. Ukuwa kwe-bubble ngayinye kwe-cavitation kuholela emandleni e-shear anamandla, ahlukanisa ama-agglomerates, ama-aggregates, futhi nezinhlayiya eziyinhloko. Futhi, i-ultrasonic cavitation ikhiqiza ukusakaza okuphezulu kwejubane okufika ku-1000km / h. Ama-jet we-cavitational liquid jet impinge agglomerates, izindonga zeseli eziqhekekile, athuthukisa ukuthunyelwa kwezinto ezibonakalayo ngaphakathi kwe-slurry kanye nokusabalalisa okukhona kulo lonke ivolumu. Ensimini ye-ultrasonic cavitation, izingcindezi zishintshana ngokushesha nangokuphindaphindiwe phakathi kwe-vacuum kuze kufike ku-1000bar. Isixhumi esijikelezayo esinama-4 mixer blade sizodinga ukusebenza ku-RPM emangazayo engama-300,000 ukufeza imvamisa efanayo yokushintsha imijikelezo yengcindezi. Abahlanganisi abajwayelekile be-rotary nabahlanganisi be-rotor-stator abakhi mali enkulu ye-cavitation ngenxa yokunciphisa kwabo ijubane.
Unentshisekelo ku-Low-up Synthesis ye-Nano-Particles? – Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi!
I-Ultrasonic disintegrator UIP2000hdT wokusakazeka kwezinhlayiyana ekuphenduleni kwensimbi engagqwali
Amadivaysi e-Probe-Type ultrasonic ayithuluzi eliwusizo kakhulu kuwo wonke amalebula. I-probe ye-ultrasonic (eyaziwa nangokuthi yi-sonotrode) iyinhlangano elula ye-titometri elula nekulula ukuyihlanza eyisebenzisa imibhangqwana ye-ultrasonic ibe uketshezi. I-Hielscher yenza ama-probes we-ultrasonic namathiphu ngobukhulu obuningi. Ekuhlukaniseni okuvame kakhulu kwama-solids kulebhu, ama-proses of ultrasonic we-3, 7, 14, noma i-22mm tip di awusizo kakhulu. Olunye usayizi wokuhlola kanye nosayizi we-ultrasonic osayizi abakhona bayatholakala. Amadivayisi ajwayelekile we-ultrasonic we-labular disintegration uhla kusuka kumandla we-100 kuya kwangama-400 watts.
Ukusabalalisa, ukuqeda, ukuxubanisa nokwakhiwa okuqinile / koketshezi
Isampula ngaphambi kokuhlaziywa
I-Crystallization / Precipitation
Ungayithenga Kanjani i-Ultrasonic Disintegrator?
I-Hielscher Ultrasonics ngumkhiqizi wesikhathi eside onolwazi we-high-performance disintegrators e-high-performance, esetshenziselwa ukusabalalisa nokugqekeza izinhlayiya noma ukuncibilikisa izimpuphu ku-ketshezi. Njengomholi wemakethe, ama-Hielscher design, enza futhi asabalalise abahlukanisi be-ultrasonic nama-homogenizer kusuka elebhu nasebhentshini phezulu afike esikalini esigcwele sezimboni.
Sikusiza ukuba uphendule imibuzo elandelayo ukuze uthole umsunguli ofanele kakhulu we-ultrasonic wohlelo lwakho nezidingo zakho:
Yini uhlelo lwakho lokuqondisa?
Yini ivolumu ejwayelekile okufanele icutshungulwe?
Iziphi izici ezibucayi zenqubo?
Yiziphi izindinganiso zekhwalithi, okufanele zifinyelelwe?
Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe nabanolwazi bazokusiza nganoma yimiphi imibuzo kanye nombono wenqubo yakho. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngokubonisana okujulile ngezinqubo ze-ultrasonic ukusiza amakhasimende ethu ukuthola ithuluzi eliphezulu le-ultrasonic. Kepha insizakalo kaHielscher ayipheleli lapha, siqeqesha abathengi noma ezikhungweni zabo noma esikhungweni senqubo ye-ultrasonic lab kanye nasezikhungweni zobuchwepheshe ukuze sibasize ngesikhathi sokuthuthuka kwenqubo, nokwenza kahle kanye nokulinganisa.
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors ahambisa kalula ama-amplopes aphezulu kakhulu, adingekayo ukuphula izinhlayiya ezinzima nama-agglomerates noma ukucubungula ama-slurries ngokuqina okukhulu okuqinile. Abaphikisi bezimboni ze-Hielscher bangaqhutshwa ngama-amplopes afinyelela ku-200µm ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Izesekeli ezengeziwe ezinjengezimpondo ze-booster, ama-flow cell, ama-sonication reaction kanye ne-reseirculation reseup ezitholakalayo zitholakala kalula futhi zivumela ukumisa uhlelo lwakho lwe-ultrasonic oluchazwe izidingo zakho zenqubo.
Imisebenzi eyindida ye-Hielscher ultrasonicators iqinisekisa ukulawulwa kwenqubo okuphezulu kakhulu, imiphumela enokwethenjelwa futhi enokuzala, ubungani bomsebenzisi nenduduzo yokusebenza.
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors angahambisa ama-amplopes aphezulu kakhulu. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Amandla okusebenzisa izikhulisi eziphakeme kangako anika amandla amakhasimende ethu ukusimamisa izinhlayiya eziyisithupha ngokuyimpumelelo ngosayizi we-nano. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
ikhwalithi – Yenziwe eJalimane
Njengebhizinisi eliqhutshwa ngumndeni futhi eliqhutshwa ngumndeni, iHielscher iyaziqhenya ngekhwalithi ephezulu yonjiniyela bayo be-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwe ekhanda lethu eliseTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Ungathenga i-Hielscher disintegrators ye-Hielscher kuwo wonke amasayizi ahlukene futhi uhla lwamanani lunikeza i-ultrasonicator engabizi kakhulu ehambelana nesabelomali sakho. Ukusuka ekuhlakazekeni kwezinhlayiyana ezimpondweni ezincane zelebhu kuya kokugeleza okuqhubekayo kokugeleza kokukhiqiza kwezimboni, iHielscher Ultrasonics ine-disintegrator efanelekile kuwe! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma i-ultrasonicator efanele kunazo zonke!